Yakakomba Sam 3 VR: BFE yakaburitswa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Croteam uye Devolver Dhijitari vane yakaburitswa Yakakomba Sam 3 VR: BFE yeGNU / Linux masisitimu anoshanda, kunyangwe iri zvakare kuwanikwa kuMicrosoft Windows. Mutambo wevhidhiyo unonakidza kwazvo uye zvakare nehunyanzvi hweVR, ndokuti, chokwadi chaicho kutora mitambo yako yemavhidhiyo kuenda kune imwe nhanho yekutamba kune uyu akabudirira uye anozivikanwa shooter anowanikwa paValve's Steam chitoro, ine iyi vhezheni nyowani yauri chokwadi kuti unoda .
Akakunda mibairo uye akayemura ratidziro kubva kuvatambi, achikohwa kubudirira munguva yakapfuura. Uyu wekutanga-munhu shooter uye chiito vhidhiyo mutambo anogona kushandisa tekinoroji yeiyo virtual reality kufadza mafeni. Musanganiswa weakanakisa ezera regoridhe rekutanga-munhu shooter mitambo yemavhidhiyo pamwe nezvakanakira rutsigiro rweVR tekinoroji muSerious Sam 3 VR: BFE. Pakati pezvinhu zvaunogona kuwana mumusoro mutsva kutsigira kweVR, ndiko kuti, mutambo wakafanana wakabudirira wevhidhiyo asi neiyi tekinoroji inogona kupa. Pamusoro peizvozvo, yakave yakabatanidzwa Yakakomba Sam Fusion 2017 kukwanisa kutamba nevatambi vanobva kune mamwe mapuratifomu akasiyana. Teleport rutsigiro rwakawedzerwa, kuwedzera kune yakasarudzika locomotion, ine simba kwazvo uye inonakidza zvombo, Arcade-Style Chiito, kutenga kusangana kwezvinyorwa zvitsva kubva kuSteam chitoro, multiplayer modhi pamwe nemamwe mimwe mitambo modhi, nezvimwe.
Zvakare ikozvino govera ne10% dhisikaundi (CHETE KUSVIRA IZVOZUVA), unogona kuiwana muchitoro Steam ingangoita € 33,29 nepo mutengo wayo wekare waive 36,99. Saka usamirira zvakare uye utore mukana nazvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yakakomba Sam 3 VR: BFE yakaburitswa yeLinux
Izvozvi zvinongoramba uine HTC Vive…. Ndinoiona ichishoshoma
Uye ndeye yakasarudzika kuVR kana inogona zvakare kuridzwa paPC isina VR?